Si aad u sii wadato taageeradaada si degdeg ah ayaa loo baahan yahay. Ku biirida boggaan waxaad ku taageertaa shaqada Martin Vrijland iyada oo deeq ah. Haddii aad sidoo kale rabto malaayiin dad ah inay awoodaan inay akhriyaan aragti ka duwan warbxinta sanad kasta, taageeradaada aad ayaa loo soo dhaweynayaa. Waxay ku xiran tahay inta aad rabto inaad ku deeqdo. Adigoo xubin ka noqonaya waxaad iga caawineysaa in aan noolaado inkastoo dhamaan weerarrada ku saabsan qofkeeyga.
Tabarucaad hal-mar - € 50,00 - aan xad lahayn
Guud ahaan Wadarta: 13.797.337
2 camera op Robert Jensen "Donald Trump ma rumeysan yahay Amarka Dunida cusub" wuxuu cadeynayaa: Jensen.nl waa mucaarad la xakameeyo
SandinG op Robert Jensen "Donald Trump ma rumeysan yahay Amarka Dunida cusub" wuxuu cadeynayaa: Jensen.nl waa mucaarad la xakameeyo
falanqeeyaan op Robert Jensen "Donald Trump ma rumeysan yahay Amarka Dunida cusub" wuxuu cadeynayaa: Jensen.nl waa mucaarad la xakameeyo